यौ।न। चा।हना। पुरा गर्न ह।स्त।मै।थु।न कति सुरक्षित छ ? – Sidha Post 24
आज पुरूष होस् या महिला यौन इच्छा जाग्नु स्वभाविक हो । तर यौन चाहना हुँदाहुँदै पुरा नहुनु पनि एउटा समस्या हो । आज यौन चाहनाको अभावमा महिला या पुरूष डिप्रेसनको सिकार भएका छन् ।
शरीर स्वस्थ रहन जति आवश्यक खानाको छ त्यति नै आवश्यक यौन चाहना पुरा गर्नुलाई मान्न सकिन्छ । यौन चाहना गलत तरिकाबाट पुरा गर्दा यसले समाजमा ठूलो समस्या निम्ताउन सक्छ । हरेक पुरूष महिलाले चाहेमा यौन चाहना पुरा हुन सक्छ ।
यस विषयमा हामीले आफ्नो पार्टनरबाट यौन चाहना पुरा गर्न सक्छौ तर त्यसका लागि हामीले खुलेर एक आपसमा कुरा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यौन सन्तुष्टि पुरा गर्न हस्तमैथुन पनि एउटा माध्यम हुनसक्छ । आजकल युवा युवतीहरू हस्तमैथुनको लतमा परेको देखिन्छ ।
सामान्य अवस्थामा हप्तामा १,२ पटक हस्त मैथुन (Masterbation) गर्दा खासै फरक पर्दैन तर अत्यधिक हस्तमैथुन गर्दा स्वास्थ्यमा नकरात्मक प्रभाव भने पक्का हुन सक्छ । आउनुस् यस विषयमा केही जानौं । आजको लेखमा मैले हस्तमैथुनको बारेमा जानकारी पस्कने छु ।
बढ्दो यौन चाहनालाई सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने भरपर्दो विधिमा हस्तमैथुन पर्दछ । हस्तमैथुनले यौनातुर पुरुष र स्त्रीलाई आफूले राख्न नचाहेको वा सामाजिक नैतिक मान्यता बाहिर परेको यौन सम्बन्धबाट बचादउँछ ।
असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट सर्न सक्ने विभिन्न यौन रोगबाट जोगाउँछ । हस्तमैथुन गर्ने अनि हस्तमैथुन गरेकामा अनावश्यक पछुतो मानेर आफ्नो मन-मस्तिष्कलाई अनावश्यक दबाब पुर्याउने र हस्तमैथुनबाट दुब्लाइन्छ, विवाहपछि यौन जीवन बिग्रन्छ, यौनांग टेढो वा सानो हुन्छ भन्ने जस्ता भ्रम पालेर आफूलाई अस्वस्थ मान्छे ठान्नु भ्रम बाहेक केही हुदैन ।
हस्तमैथुनको कारण मानिस दुब्लाउँदैन । कति हस्तमैथुन गर्ने भन्ने विषय व्यक्तिको यौन चाहना भएका बेला यौन साथीको अभावको परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो । हस्तमैथुन गरेको विषयलाई चिन्ताको रूपमा लिएपछि मात्रै कोही दुब्लाउन सक्छन् ।
अन्यथा हस्तमैथुन गरेकै भरमा मानिस दुब्लाउने कुरा वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भएको छैन । तर, हस्तमैथुनलाई आवश्यकता भन्दा बढी लतका रूपमा प्रयोग गर्ने र यसलाई सम्भोगको स्थायी विकल्पका रूपमा प्रोत्साहन दिएर धेरै नै अग्रगामी बन्ने दु:साहस कसैले गर्नु हुँदैन ।
कुनै पनि बस्तुलाई आवश्यक भन्दा बढी प्रयोग गर्दा नोक्सान हुन सक्छ तर सामान्य अवस्थामा यसको प्रयोगले शरीर कमजोर हुन सक्छ । यस्तो नहोस् भन्नाका लागि पौष्टिक आहारमा विषेश ध्यान दिन आवश्यक छ ।
प्रेमीकाले अर्कै केटासङ बिहेवारि गरेपछि पागल भएका प्रेमीलाई १बर्ष पछी भेट्दा सबैलाई भावुक बानायो ! यो हो दुनियाँ रुवाउने प्रेममा पागल प्रेमीको भिडियो जुन
भिडियोले सबैलाई भा’वुक ब’नायो” सङै जिउने सङै मर्ने कसम खाएर करिब ७ बर्ष गहिरो प्रेम सम्बन्धमा रहदा र’ह्दै अ’चानक यु’वती प्रेमीकाले अर्कै केटासङ बिहे गरेपछी , ****
सहन नसकेर पगल भएका प्रेमीलाई जब एक दिन युवती प्रेमीका सिखाले भेट्छिन । तर उनी जुन सिखाको लागि पागल बनेका थिए उसलाई नै नचिच्ने भइसकेका हुन्छन् ।
झट्त हेर्दा कुनै चलचित्र जस्तो लाग्ने यो दृश्य हाम्रो छोमेकी मुलुक भारतको हो हेर्नुस् प्रेमीकाले बिहे गरेको १बर्षमा नै पगल बनेका आयुस। हेर्नुस् पुरा भिडियोमा ! ****
एक फार्म हाउसमा तीन युवतीहरूमाथि सामूहिक अनैतिक कार्य भएको घटना प्रकाशमा आएको छ । पुलिसले यस घटनाको प्रतिवेदन दर्ता गरी सातजनालाई पक्राउ गरेको छ र बाँकी दुई अझै फ रा र छन् । हाल प्रहरीले फार्म हाउसलाई सिल गरी दुई युवकको खोजी शुरू गरिसकेको छ ।
यो घटना भारत, उत्तर प्रदेशको नोएडामा भएको हो । यस सम्बन्धमा, गौतमबुद्ध नगरका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्णले भने कि तीनै जना कल गर्लहरू दिल्लीका हुन् । ती मध्ये एक कल गर्लले बुधबार पुलिस स्टेशनमा रिपोर्ट दर्ता गरिन् । उक्त प्रतिवेदनमा ती युवतीले भनिन्, म लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन नजिकै ग्राहकको खोजीमा राति ११ बजे आफ्नो साथी सँगै उभिएकी थिएँ ।
यस बीच, एक सेतो रंगको कार आयो र त्यहाँ रोकियो । कारमा २ जना मानिस थिए । उसले ९ हजार रुपैयाँमा एक रातको लागि ३ जना युवतीहरू बुक गर्‍यो । यस पछि, कारमा बसेर, उनले नोएडाबाट दिल्ली ल्याए ।
आजतकमा छापिएको समाचार अनुसार, नोयडा जान केटीहरु मानेनन्, तिनीहरूले भने कि घर केहि टाढामा छ । यसपछि युवकले तीनै जना केटीलाई एक्सप्रेस वे क्षेत्रको गाउँको एक फार्म हाउसमा ल्याए ।
एसएसपीका अनुसार जब फार्म हाउसमा कल गर्लले तीन जनाको सट्टा ९ जना मानिस हुने थाहा पाए, केटीहरुले मानेनन् । यो सुनेपछि केटाहरु रिसाए र उनीहरूले पि ट